အဆိုပါ 8 အကောင်းဆုံး 2-in-1 Laptop ကို Tablet များ 2018 ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူ
လမ်းညွှန်များဝယ်ယူ Computers & Tablet များ
by ဒါဝိဒ်သည် Beren နှင့်ဂျေး Schneider
သငျသညျနှစ်ဦးစလုံးရှိသည်နိုင်သည့်အခါဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး Laptop နဲ့တက်ဘလက်များအကြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ?
စုံလင်သောကွန်ပျူတာများအတွက်-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှရှာပုံတော်မှာတော့ဒီနေ့ရဲ့ဝယ်လက်အများစုသူတို့လိုချင်တဲ့တဦးတည်းအရေးကြီးသောအရာသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူကြောင်းသဘောတူသည်။ ဒါဟာဝေးတခုထွက်ပေါက်ကနေအချိန်ဖြုန်းမယ့်ပဲဖြစ်ဖြစ်, တစ်ဦးလေယာဉ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ညဦးယံ၌စာအုပ်ဖတ်နေဘို့သုံးပြီး 2-in-1 မျိုးစပ်မှတ်စုစာအုပ်အပေါငျးတို့သဒေါသဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ၏ဤအသစ်ကအမျိုးအစားထွန်းအားလုံးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ပ်တော့သို့မဟုတ်တက်ဘလက်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်စေန်းကျင်တင်ဆောင်၏ရွေးချယ်မှုဖျက်သိမ်း။ မည်သို့ပင်သင့်အသုံးပြုမှု-ကိစ္စတွင်၏အကောင်းဆုံး hybrids တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ရေးကျိန်းသေသငျသညျနှစ်ဦးစလုံးကမ္ဘာရဲ့အကောင်းဆုံးကိုငါပေးမည်။
ကွန်ပျူတာပစ္စည်းကိရိယာများကို Microsoft ရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်းပိုင်းတစ်ခုမှာနှစ်များတွင်ထုတ်လုပ်ထားပြီး, ထို Surface ကစာအုပ်စစ်မှန်သောလူအစုအဝေးစိတ်ကိုနူးဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏ 2015 ကြားမှာထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက် 131 ရာခိုင်နှုန်းအထိ, ဒီမျိုးစပ်နေတဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြုပါ-It-အားလုံးစက်ဖြစ်ပါတယ်။ သိုလှောင်မှု 128GB တစ်ဦးက Intel Core i5 ပရိုဆက်ဆာများက Powered, RAM ကိုနှင့်ဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်း၏ 12 နာရီအထိ 8GB, သင့်အလုပ်အမှုကိုပြုရရှိနိုင်ပါကြွက်သားမရှိရှားပါးမှုရှိပါတယ်။ အဆိုပါ 13.5 လက်မ PixelSense display ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်စိတ်ကူး၏တိုတောင်းသောအချည်းနှီးဖြစ်၏နှငျ့သငျ Display ရဲ့အပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်ရေးသားခြင်းများအတွက် Surface ကကလောင် (သီးခြားစီကိုရောင်း) ကိုသုံးသည့်အခါကပင်ပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့။
သည်အခြား features တွေအတွက် Windows သဘာဝကျကျမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမှတ်စုများရေးသားခြင်းများအတွက်မှင်အဖြစ်တာရှည်ခံခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးနှစ်ဦးစလုံးရဲ့စေ့စပ် built ဟာ့ဒ်ဝဲပါဝင်သည်။ ရုံ 3,34 ပေါင်အလေးချိန်ကတော့လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ display ကိုမှန်ကန်ဘဝအရောင်များကိုအပြိုင်ထက်ပိုခြောက်လသန်း pixels ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Surface ကစာအုပ်ကီးဘုတ်ကနေ display ကိုဖယ်ရှားခြင်းသင်မှန်တက်ဘလက် mode သို့ဝင်ခွင့်ပြုသော်လည်း, သင်သည်လည်း display ကို 180 ဒီဂရီလှန်နှင့်မာလ်တီမီဒီယာကြည့်ရှုများအတွက်စံပြထောင့်ဖြစ်သောတင်ဆက်မှု mode ကိုများအတွက်ကပြန်ပြီးပူးတွဲရမည်နိုင်ပါတယ်။
Windows 10 ကိုအပြေး, Microsoft ၏ Surface Pro ကို4Laptop နဲ့ Tablet ကိုကမ္ဘာနှစ်ဦးစလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းတစ်ခုအညီအမျှထူးချွန် 2-in-1 မျိုးစပ်ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုက Intel Core i5 ပရိုဆက်ဆာများက Powered, RAM ကို 8GB နှင့် 256GB hard drive ကို, ထိုနေ့ရက်သည်၏အဆုံးမှာ Netflix နဲ့ Bing များအတွက်နှမြောဖို့အခန်းတစ်ခန်း (နှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်း) နဲ့နေ့စဉ်အလုပ်များအတွက်လုံလောက်သောမြင်းကောင်ရေရှိပါတယ်။ အဆိုပါ 12.3 လက်မ PixelSense display ကိုအဆိုပါ Surface ကစာအုပ်အလားတူ features တွေကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်မှတ်စုများကိုဖမ်းယူဖို့သဘာဝလမ်းများအတွက် Surface ကကလောင်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါအမျိုးအစားဖုံးကီးဘုတ်တစ်ဦးစှာတိုးတက်လာသောစာရိုက်အတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ်တဲ့လန်းဆန်းဒီဇိုင်းအဖြစ်ကိုပိုမိုတိကျသောကလစ်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုနှစ်ခု-button ကို trackpad ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ Surface ကမှတိကျသောရဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်တကွ, ကီးဘုတ်အလွယ်တကူအရပ်သို့နှိပ်လိုက်ရင်ကာလက်ငင်းမှာထပ် Laptop နဲ့နောက်ကျောမှတက်ဘလက်ကနေညှိ။
Asus က T102HA Transformer Mini ကို 10.1 လက်မအရွယ် 2-in-1 မျိုးစပ်ကွန်ပျူတာ RAM နဲ့ 128GB EMMC သိုလှောင်မှုအနေနဲ့ Intel Atom Quad-core X5 Processor, 4GB စွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ကီးဘုတ်နှင့်အတူ၎င်း၏ 1.7 ပေါင်, .6 လက်မအရွယ်ဘောင် superbly အဆိုပါပိုက်ဆံအိတ်-ဖော်ရွေစျေးနှုန်း tag ကိုရှိနေသော်လည်းကြံ့ခိုင်ခံစားရသည့်စံပြတည်ဆောက်အရည်အသွေးကိုထုတ်လုပ်နေသည်။
ယင်း၏ Microsoft ကလုပ်ယှဉ်ပြိုင်မှုအချို့ကိုမတူဘဲ, အ Asus Transformer ညာဘက်နောက်မှအပိုဆောင်းပေးချေမှုများဘို့လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းစေပါတယ်သောကလောင်, ကီးဘုတ်နဲ့လက်ဗွေရာစာဖတ်သူနှင့်အတူ box ကိုထွက်လာရော။ ကီးဘုတ်သံလိုက်မှတဆင့်အလေးထားပေမယ့်လက်တော့ mode မှာတစ်အိတ်ထဲ၌လောင်းလျက်ရှိသို့မဟုတ်စားပွဲခုံပေါ်လွယ်ကူသောအသုံးပြုမှုအတွက် kickstand နှင့်အတူလှုပ်ရှားမှု၏ 170 ဒီဂရီအထိကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာညာဘက်တက်ဘလက်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသို့ခုန်အဘို့အ detaches ။ ထို့အပြင်အသေးစားအရွယ်အစားကို USB တစ်ခုအပြည့်အဝပြန့်ပွားနှင့်အတူ၎င်း၏ကြီးမားသောဆက်သွယ်မှု options များ, မိုက်ခရို USB, micro HDMI နဲ့ microSD ဆိပ်ကမ်းများဖွက်ထားပေးသည်။
ကောင်းစွာပြုလုပ်လာနိုငျပါးလွှာမယ့်ကြောင့် Intel Core i7 8-powered Matebook X ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံးခရီးဆောင်အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအရာ 12,55 မီလီမီတာအထူ, ဒါပေမယ့်အဖြစ်မဆို 2-in-1 ကိုသင်စျေးကွက်အပေါ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကြောင်းအဖြစ် Full-featured ။ အဆိုပါရေနံတွင်းတူးစင်ကို Windows 10, တစ်ဦး 2K resolution ကို screen ကို, (ကြောင်းသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူအချက်မှဖြည့်စွက်) Gorilla Glass ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ထပ်မံသွားလာရင်းရုပ်ရှင်ညက၎င်း၏ Tiny နှင့် Dolby-ဒီဇိုင်းစပီကာအလေးပေးထားတဲ့ 88 ရာခိုင်နှုန်းမျက်နှာပြင်-to-ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပါရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင်သင်ရုံထိုကဲ့သို့သောချောမွေ့ပြောင်လက်စက် fit ရန်သင့်ကျောပိုးအိတ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
မြေတပြင်လုံး Zenbook လိုင်းစူပါပါးလွှာ, စူပါအလင်း flipbooks အတွက်အထူးပြုသည်။ ဤသည် UX360CA 1.2 GHz အမြန်နှုန်းတစ်ဦးကို full HD touchscreen က Display, RAM ကိုအစိုင်အခဲပြည်နယ်သိုလှောင်မှုနဲ့ 8GB ၏ 512 GB ကိုမှာ clocking တစ် 7th gen Intel က i5 မှ Processor ကိုအပါအဝင်ကျန်တာတွေတစ်ဦးရတနာသိုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လက်ျာဘက်အကြောင်းကို3ပေါင်နဲ့အထူတစ်နှစ်ခွဲလက်မထက်လျော့နည်းမှာပါ, ဒီနည်းနည်းအရာပဲအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမခြေရာကိုအတူလက်ပ်တော့အိတ်သို့ချော်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုသငျသညျဝယျနိုငျအတော်လေးအပေါ့ပါးဆုံးစာအုပ်မဟုတ်ပါဘူးစဉ်တစ် Travel Laptop ကိုဝယ်ယူသည့်အခါစဉ်းစားရန်အခြားအချက်များစျေးနှုန်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးနေသောခေါင်းစဉ်: သင်တဦးတည်းတန်ဖိုးရှိထောင်ပေါင်းများစွာ get လျှင်, သင်ရှည်လျားခရီးစဉ်အပေါ်ယူလည်းကြောက်လန့်ဖြစ်လိမ့်မယ်, နှင့် သငျသညျပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့တဦးတည်းရလျှင်, အဖြစ်ကောင်းစွာတက်ကိုင်မည်မဟုတ်။ ဒါဟာတဦးတည်းအနေနဲ့မယှဉ်နိုင်တဲ့ချိန်ခွင်လျှာရိုက်။
အဆိုပါ Samsung က Notebook9Pro ကို၎င်းသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူ (နှင့် touchability) တစ်ဦးက Surface Pro ကို၏အပေါင်းကို Samsung ရဲ့ S-ကလောင်၏ပဉ္စလက်နှင့်အတူတစ်ဦးအသက် 15 လက်မအရွယ် Macbook ၏တနျခိုးပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါလက်တော့နှစ်ခုအရွယ်အစားလာ, သို့သော်ဤ 13 လက်မမော်ဒယ်တစ်ဦး 1920 × 1080 pixel resolution နဲ့, 3.5 GHz အမြန်နှုန်း Processor, RAM ကို 8GB နှင့်တစ်ဦး ADM Radeon 540 ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်အတူမျက်နှာပြင်န်ထမ်း။ ရုံအောက်မှာ $ 1000 မှာ, ကဂိမ်းထဲမှာအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးများကိုတဦးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနည်းနည်းအင်အားကြီး, စျေးနှုန်းသည်ပြီးပြည့်စုံစက်ဆိုဖို့ကလောက်။
အဆိုပါ HP က် Spectre x360 သစ်ကို Intel က Kaby ရေကန် Core i7 processor ကိုအတူတက် souped ရဲ့တစ်ထူးချွန် 15.6 လက်မ 2-in-1 မျိုးစပ်ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်၏ RAM ကို 16GB နှင့် 512GB ၏ထို့အပြင် downloads,, On-The-go ဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံကိုတည်းဖြတ်အဖြစ်မာလ်တီမီဒီယာလုပ်ငန်းများကိုအဘို့တန်ခိုးနှင့်အာကာသနှစ်ဦးစလုံး၏အဘယ်သူမျှမပြတ်လပ်မှုပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ 4K 3840 x ကို 2160 15.6 လက်မအရွယ် display ကိုမာလ်တီမီဒီယာနှင့် Nvidia GeForce 940MX ဂရပ်ဖစ်ကတ်ဂိမ်းယဉ်ကျေးနှစ်ဦးစလုံးအတှကျထူးချွန်ကြည့်အတွေ့အကြုံကိုပေးထားပါတယ်။ ဤအမှုအလုံးစုံအာဏာကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုနှင့်ဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်းကိုးနာရီအထိ 12 နာရီမှတက်ပြေးနိုင်စွမ်းရဲ့ဘက်ထရီနှင့်တကွကြွလာ။
ခရီးသွားလာ, ဂိမ်းနှင့် touchscreen ပထမဦးဆုံးအတွေးမှာလက်-In-လက်သွားရပုံပေါ်ပေမယ့်ဿုံတန်းစီနေနောက်ဆုံးပေါ် Dell က Inspiron 7000 နင်းကြပါဘူး။ ပထမဦးစွာပယ်သည် 15.6 လက်မအရွယ်အပြည့်အဝ HD display ပါကသင်သွားလာရင်းမဆိုဂိမ်းကစားဘို့အလိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာ, ကြီးမားပလက်ဖောင်းကိုငါပေးမည်။ RAM ကို၏ 12GB သင်အပြောင်းအလဲနဲ့ခေါင်းကိုအခန်းထဲများများပေးတော်မူမည်နေစဉ် Intel HD Graphics 620 ကဒ်ရှိရှိကွှေးကျွောကြည့်-and ခံစားပါဝါပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါမီးအောက်ခံကီးဘုတ်မှ Add နှင့်ဘက်ထရီအသက်တာ၏ခြောက်နာရီနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းပတ်ဝန်းကျင်နီးပါးသင်ဤအရာဝန်းကျင်လှန်ပြီးတက်ဘလက်သို့လှည့်နိုင်ပါတယ်မေ့လျော့စေပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခုသင် iPad Mini ကို4Buy သငျ့သလော
အိုင်ပက် Air လေကြောင်းလိုင်းနှင့် iPad Mini ကို2အကြားခြားနားချက်
သင့်ရဲ့ Computer ကိုဖွင့် CPU ကိုအပူချိန်စုံစမ်းလုပ်နည်း
2018 ခုနှစ်တွင် Buy ဖို့7အကောင်းဆုံးကို PC ဂိမ်းမှုများ
သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များများအတွက်အကောင်းဆုံး Laptop ကို Pick လုပ်နည်း
2018 ခုနှစ်တွင် Buy မှ ASUS ကလက်ပ်တော့ 8 အကောင်းဆုံး
Slate Tablet ကိုကွန်ပျူတာနှိုင်းယှဉ်
My First စီးရီး: My First တည်းဖြတ် Laptop ကို
IOS ကိုမေးလ်ထဲမှာနောက်ထပ်စမတ် Inbox ထဲမှာ Folders Add သို့မဟုတ် Remove လုပ်နည်း
သင့်ရဲ့ iPhone ကတစ်ဦးကို Google ဖုန်းသို့ကွေ့ရန်
Internet Explorer ကို Uninstall သို့မဟုတ် Remove လုပ်နည်း
IPhone အတွက် 10 အကောင်းဆုံးဘေ့စဘော Apps ကပ
အမည်မသိ web host
Zoiper VoIP Softphone ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဘယ်ကြောင့်သငျ့ငါ Backup ကိုကြှနျတေျာ့ကို Windows ကွန်ပျူတာနှင့်မည်သို့မကြာခဏ?
အဆိုပါ OSI ကွန်ယက်မော်ဒယ်အပေါ်ဘုံမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
Grand Theft Auto IV ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (PC ကို)
တစ်ဦး 802.11b Wi-Fi ကိုကွန်ယက်၏အမှန်တကယ်မြန်နှုန်းဆိုတာဘာလဲ
သင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာ Settings ကို Access ကို Allow သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်
Xbox 360 တို့အင်္ဂါရပ်များစာရင်း
နယူး Xbox One တွင်ပိုင်ရှင်များများအတွက်လက်ဆောင်ပေးမယ်အကြံပြုချက်များ
သတင်းလွှာဒီဇိုင်းအတွက် Bylines အသုံးပြုခြင်း
သင့်ရဲ့ Yahoo က! တင်ပို့ဖို့ကိုဘယ်လို မေးလ်လိပ်စာစာအုပ်
ရိုးရှင်းသောကွန်ယက်စီမံခန့်ခွဲမှုပရိုတိုကော (SNMP) ကိုတစ်ဦးကလျင်မြန်စွာလမ်းညွှန်
တစ်ဦး Cable ကို / ဂြိုဟ်တု DVR မှစ. တစ် DVD ကို Recorder မှမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
Lycos Mail - အခမဲ့အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု
PS2 အပေါ်: 'ကာဗွန်မြန်နှုန်းများအတွက်လိုအပ်နေသောူပည်သူ' 'များအတွက်အကောင်းဆုံး cheat နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလေ့လာပါ
သင့်ဂီတစာကြည့်တိုက်စီမံခန့်ခွဲသည်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Tools များ
သင့်ရဲ့ဘလော့ 10 ပျော်စရာ Widgets